ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuator
ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.Over အဆိုပါ အနှစ် ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuaသို့r ရှိ ဖူး တင်ပို့ တွင် သုတ် တိုင်း တစ်နှစ်, နှင့် ရှိ ဖူး ကျယ်ပြန့် နှင့် အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, ရေနံ, လျှပ်စစ် ပါဝါ, ဓါတုဗေဒ နှင့် oအဆိုပါr တွင်dustries.AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ညီညီညွတ်ညွတ် နှင့် contတွင်ue ကျွန်တော်တို့၏ efဘို့ts သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
2. ကောင်းပြီ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော် rotary actuator အဘို့အပိတျထားသော: အခွံနဲ့ဖုံး၏ခွက်-ခုံးဖွဲ့စည်းပုံမှာ improveing ​​နှင့်ရေအထောက်အထား IP67 နှင့် IP68 (option ကို) ပေးဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့်အတူပိတျထားသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော် rotary actuator များအတွက် 3. နျ Standard4န့်သတ်ချက် switches များ: အပြည့်အဝ cloased များအတွက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်2န့်သတ်ချက် switch ကို2န့်သတ်ချက် switch ကိုပေး။
AOX-R ကိုစီးရီးရေအတှကျအစက်မျက်နှာပြင်အထောက်အထားမော်တော် rotary actuator မျှ burrs နှင့်မျှမသဲတွင်းရှိပါတယ်။ အတွင်းအခန်းထဲသို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကုသနှင့်ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်ကိုအလွယ်တကူ corroded မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 60000 လျှပ်စစ် actuators.We ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာနှင့်အတူကရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော် rotary actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။3တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်, 27 utility ကိုမော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့်, 49 ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များနှင့်4တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စုစုပေါင်း 89 မူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။2utility ကိုမော်ဒယ် patents.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော် rotary actuator များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော် rotary actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား စက်တပ် rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်